काठमाडौं । स्थानीय प्रशासनले काठमाडौं उपत्यकाभित्र निषेधाज्ञा थप कडाइ सुरु गरेको छ । साँझ पसल खोल्न नदिने निर्णय बिहीबारदेखि कार्यान्वयनमा आएको छ भने बिहान पनि ९ बजेसम्म मात्रै पसल खुला
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सरकारलाई बुझाउनु पर्ने कर राजस्वको विवरण बुझाउनु पर्ने म्याद र कर रकम भुक्तानीको लागि समय थप गर्न माग गरेको छ । महासंघले कोभिड–१९ को
राजनीतिक संकट टार्न सरकारले गर्‍यो हवाई उडान बन्दको निर्णय !
काठमाडौं । सरकारले आन्तरिक तथा वाह्य हवाई उडान बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । कोभिड संक्रमण भयावह रुपमा फैलिएको निष्कर्ष निकाल्दै आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा बैशाख मसान्तसम्म रोक लगाउने सरकारको
काठमाडौं । सरकारले जारी गरेको निषेधाज्ञाले निर्यात क्षेत्रमा मन्दी आउन सक्ने निर्यात व्यवसायी महासंघ नेपाल (फिन)ले जनाएको छ । महासंघले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै निषेधाज्ञाले रोजीरोटी गुमाउने वर्गलाई राहत तथा
व्यक्तिगत आयकर छुटको सीमा ७ लाख पुर्‍याउन महासंघको माग
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयकर सीमा बढाउन माग गरेको छ । महासंघले व्यक्तिको आयकर छुट ७ लाख र दम्पतिको हकमा ८ लाख रुपैयाँसम्मको कर छुट हुनुपर्ने माग गरेको
काठमाडौं । कोरोना संकट बढ्दै गएपछि होटल तथा रेष्टुरेन्ट चल्न छाडेका छन् । यसले गत वर्षको जस्तै एलपी ग्यासको बिक्री कम हुन थालिसकेको छ । गत वर्ष लकडाउनको सुरुमा ग्यास
नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय निर्यात एक्स्पो प्रत्येक वर्ष, तयारीका लागि १५ करोड बजेट चाहियो !
काठमाडौं । निर्यात व्यवसायी महासंघ नेपाल (फिन)ले नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय निर्यात एक्स्पो प्रत्येक वर्ष गर्नुपर्ने माग गरेको छ । महासंघले यसको तयारीका लागि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा १५ करोड रुपैयाँ विनियोजन
सेन्ट किष्ट्स एण्ड नेभिसदेखि आयरल्याण्डसम्मको शंकास्पद एफडीआई नेपालमा !
काठमाडौं । मुलुकमा ५३ देशको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) रहेको पाइएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बिहीबार प्रकाशित गरेको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीसम्बन्धी सर्वेक्षण प्रतिवेदन अनुसार सबैभन्दा बढी लगानी छिमेकी भारतबाट
काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघको एनआरएनए नेपाल डेभलपमेन्ट फन्ड स्थापना भएको छ । विश्वभर रहेका नेपालीहरुको पूँजीलाई नेपालमा लगानी गर्ने उद्देश्यका साथ संघले फन्ड स्थापना गरिएको हो । १० अर्ब
मुलुक लकडाउनको बाटोमा, सरकारले लगायो सर्वत्र प्रतिबन्ध !
काठमाडौं । कोरोना सङ्क्रमण बढेसँगै सरकारले जोखिम न्यूनीकरणका लागि विभिन्न आदेश जारी गरेको छ । यसले मुलुक लकडाउनको दिशामा अघि बढेको प्रतीत हुन्छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सङ्क्रामक रोग